Kiisaska COVID ee ugu sarreeya weligood kuna soo kordha Hawaii inta Dalxiisku aad u kobcayo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Kiisaska COVID ee ugu sarreeya weligood kuna soo kordha Hawaii inta Dalxiisku aad u kobcayo
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Gudoomiyaha Hawaii David Ige iyo Lieutenant-Governor Josh Green
Dalxiiska Hawaii wuu kobcayaa. Markaad ku lugaynayso mashquulka Wadada Kalakaua ee Waikiki ama aad wax ka iibsanayso Ala Moana Center ama ku qiiqa xeebta Waikiki, ma ogaan doontid Hawaii inay leedahay xaalad degdeg ah oo caafimaad oo aad u daran oo abid la duubay.
Kuwo badan ayaa ku tilmaamay naxdin. Hawaii waxay diiwaangelisay 622 kiis oo cusub oo ah COVID-19 maanta iyo 3 dhimasho ah.
Kaliya 3 toddobaad ka hor, tirada caabuqyada cusub ee maalinlaha ah waxay ka bilaabmeen 40 ilaa 60 illaa 100 oo hadda waxay gaareen in ka badan 600. Tirada ugu badan ee abid laga diiwaan geliyey Gobolka Hawaii waxay ahayd 307 bishii Ogost 11, 2020.
Illaa 30,000 oo booqdayaasha gudaha ah ee Mareykanka ah ayaa imanaya Aloha Sheeg maalin kasta, adoo ka tagaya duulimaadyo badan oo ku duulaya awoodda shabakad sii kordheysa oo ah waddooyinka cusub ee hawada gudaha.
The Maamulka Dalxiiska ee Hawaii iyo Guddoomiyaha Hawaii Ige ma xusaan warshadaha dalxiiska markii ay xaqiijinayaan kororka ugu sarreeya ee kiisaska COVID weligeed.
Guddoomiyaha, ayaa, u sheegay eTurboNews:
Xayiraadaha safarka ayaa loogu talagalay dhammaan rakaabka, ma aha booqdayaasha oo keliya, mana ka fikirayo wax isbeddel ah oo ku yimaada barnaamijka Safarka Nabdoon waqtigaan.
Fayraska iyo dalxiiska ayaa ku soo badanaya Hawaii.
Maanta waa, shaki la'aan, kororka ugu sarreeya ee tirooyinka caabuqa abid, tanina waa cabsi.
Hoteellada iyo shirkadaha diyaaradaha ayaa awood u leh; ma jirto meel bannaan oo loogu talagalay shukumaannada ciidda ku jira xeebo badan.
Iyada oo leh 100+ tirooyin maalinle ah oo sii kordhaya, gobolku wuxuu galay xidhitaan dhammaystiran sanad ka hor, laakiin hadda oo leh 600+ kiis oo cusub, Guddoomiyaha Hawaii ayaa weli la filayaa inuu kor u qaado dhammaan xayiraadaha haray marka heerka tallaalku gaaro 70% dadweynaha.
Guddoomiye Cige ayaa shir jaraa’id oo uu maanta qabtay ku sheegay in 70%+ tirada la filayo in la gaaro bisha September.
Hawaii waxay beddeshay shuruudihii looga jawaabi lahaa COVID-19 iyo kala duwanaanshaheeda iyadoo la go'aaminayo xannibaadaha ku saleysan lambarrada kiisaska, si hadda loogu saleeyo tirada dadka la tallaalay ee gobolka. Dabcan, 30,000 oo booqdeyaal ah ayaa imanaya Aloha Gobolka wax saamayn ah kuma laha cabbirkan ama tirooyinka.
Sida uu sheegay Guddoomiyuhu, 6 ka mid ah 10,000 oo qof oo la tallaalay ayaa qaadsiiya, marka la barbar dhigo 300 oo ka mid ah 10,000 oo aan la tallaalin.
Guddoomiyuhu wuxuu ku taliyay in qof walba la tallaalo, 6-fiit ka fogeeyo dadka kale, iyo maaskaro gudaha lagu xidho.
Gudoomiyuhu wax faallo ah kama bixin eTurboNews su'aalaha ku saabsan suurtogalnimada in dib loo soo celiyo xannibaado kale, oo ay ku jiraan xadka makhaayadaha, booqdayaasha imanaya, iyo bandowga.
Dhaqaaluhu wuxuu si cad ugu guulaysanayaa welwelka caafimaad ee COVID, Hawaii hadda waxay dalka ku hoggaaminaysaa farriintan, halka xuduudaha caalamiga ahi wali xidhan yihiin.
Elsie wuxuu leeyahay,
Ogosto 1, 2021 markay tahay 14:15
Ooooh… cabsi! Waa inaan ku noolaanaa cabsi! Kiisaska MA AHA isbitaal, iyo 3 dhimasho oo ka mid ah dad ka badan 1.4 milyan ma aha masiibo. 3 -daas qof ma u dhinteen '' covid ama u dhintay '' covid. Cayilka iyo ku-xadgudubka mukhaadaraadka ayaa ku badan jasiiradaha… waa maxay xaaladihii hore u jiray dadkan? JOOJI cabsida cabsida leh !!